सांसद बन्न लागेका वामदेव गौतमलाई फेरी झट्का, अब के गर्छन ओली ? — Sanchar Kendra
५४० वर्ष माथिका जनताका लागि भन्दै देउवा सरकारले गर्यो यस्तो घोषणा, कहिलेदेखि हुन्छ लागु ?
सांसद बन्न लागेका वामदेव गौतमलाई फेरी झट्का, अब के गर्छन ओली ?
सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराउने षडयन्त्र भएको भन्दै डोल्पाका युवाहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।
सांसद बुढालाई राजीनामा गराएर उक्त क्षेत्रबाट बर्दियाबाट चुनाव हारेका नेकपाका नेता वामदेब गौतमलाई उपनिर्वाचनमार्फत् संसदमा ल्याउन चलखेल भएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
युवाहरुले शुक्रबार काठमाण्डुमा पत्रकार सम्मेलन गरी सांसद बुढाले डोल्पाली जनताको विश्वास जितेको र उनलाई पाँच वर्षसम्म काम गर्न दिन नेकपाको नेतृत्वको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।
पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन राज्यमन्त्रीसमेत रहेका बुढालाई राजीनामा दिन लगाएर वरिष्ठ नेता गौतमलाई उपनिर्वाचनमार्फत् डोल्पाबाट सांसद बनाउने चर्चा चेलेको छ । तर, यो कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने डोल्पाका युवाहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले निर्वाचनमा हार खाएका वरिष्ठ नेता गौतमलाई सांसद बनाए त्यो नेकपाका लागि इतिहासको सबैभन्दा ठूलो कलंक हुने तर्कसमेत गरेका छन् ।
जनताका आशा र भरोसाका रुपमा रहेका बुढालाई राजीनामा दिन कुनै पनि हिसाबले नमिल्ने भएकाले त्यसो नगर्न नेकपालाई सचेत गराउनु परेको डोल्पाका युवा राजीव शाहीले बताए ।
डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद बुढाले निर्वाचनमा अत्याधिक मत पाएका थिए । स्थानीयले बुढा पाँच वर्षका लागि आफ्नो प्रतिनिधि भएकाले कसैले पनि बीचमा राजीनामा नगराउन नमिल्ने तर्क पनि गरेका छन् ।
२०७५ साउन १९ मा प्रकाशित ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरको बोर्ड बैठकमा हात हालाहाल
थप १२८२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ७ को मृत्यु
दुर्घटनाबाट जोगिएको बुद्ध एयरको विमानबारे सरकारले छानबिन गर्ने
दक्षिण कोरियामा ह्वात्तै बढ्यो फेरि कोरोना संक्रमण
७३ अंकले घट्यो नेप्से, सेयर बजारमा पहिरो